Wasiir sheegay in dalka uu kajiro musuq maasuq weyn - Awdinle Online
Wasiir sheegay in dalka uu kajiro musuq maasuq weyn
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar ayaa sheegay in dalka Soomaaliya uu kajiro Musuq-maasuq kii ugu weynaa, kaas oo u baahan in wax laga qabto.
Wasiirka oo khudbad ka jeediyay Kulanka Maanta ee Golaha Shacabka ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay kaliya musuq maasuq u yaqaanaan lacago la kala qaato, balse dalka uu kajiro musuq maasuq Waxbarasho, sida Iskuulada & Jaamacadaha.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in maalin dhaweed ay dhacday in Arday farabadan oo doonaya inay dhigtaan Jaamacad, balse markii baaritaan lagu sameeyay laga weyay arday heysta Shahaadada Dugsiga sare.
Ugu dambeyn Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar waxaa uu sheegay in Wasaaradda Waxbarashada ay qorsheyneyso in musuq maasuq dhanka waxbarashada ah ee jira inay waxka qabato.
Previous articleGolaha Shacabka oo Maanta diiday in uu hortago RW Rooble
Next articleMusharixiinta Mucaaradka oo sheegay in Farmaajo uu inqilaab ku joogo Villa Soomaaliya